Mangidy ny Fahafatesana: Mbola ho Velona Indray ve ny Maty?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mizo Mooré Myama Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
Mangidy ny Fahafatesana
Tsy tian’ny ankamaroan’ny olona ny miresaka momba ny fahafatesana. Mety hidonam-pahoriana anefa isika, na ho ela na ho haingana, ary tena mangidy izany.
Tsy ampoizina mihitsy ny fahafatesan’ny ray aman-dreny, na vady, na zanaka. Mety ho tampoka mantsy no hitrangan’ny loza, na hoatran’ny tsy mety tapitra. Na ahoana na ahoana dia mampahory foana ny fahafatesana.
Maty voadonan’ny fiara ny rain’i Antonio. Hoy izy: “Hoatran’ny hoe nohidian’ny manam-pahefana ny tranonao ary nentiny ny lakile. Tsy afaka miverina ao ianao na dia vetivety fotsiny aza. Fahatsiarovana sisa tavela. Tsy rariny ilay izy ka tsy manaiky ny sainao. Tsy afa-manoatra anefa ianao satria izay no zava-misy.”
Maty vady i Dorothy tamin’izy 47 taona. Niezaka nitady ny valin’ireo fanontaniana nanitikitika ny sainy izy. Mpampianatra sekoly alahady izy ka nieritreritra hoe mbola ho velona indray ny maty. Tsy tena fantany anefa izay mitranga aorian’ny fahafatesana, ka nanontany mpitondra fivavahana anglikanina iray izy. Namaly izy io hoe: “Tsy misy tena mahafantatra an’izany fa aleo miandry dia ho hita eo.”
Tsy maintsy miandry tokoa ve isika, sa misy fomba hahalalantsika raha mbola ho velona indray ny maty?
Mitady Ody Faty ny Olona
Nitady ody faty ny olona hatramin’izay. Mety ho resy ihany ve ny fahafatesana?
Hizara Hizara Mangidy ny Fahafatesana